10 Tallaabo oo Wax -ku -ool ah Si Loo Helo Amaah Ganacsi 2021 Amaah
Bogga ugu weyn 10 Tillaabo oo Wax ku ool ah si aad u hesho Amaah Ganacsi 2021
Xataa meheradaha waaweyn iyo kuwa dhisan ayaa u baahan daymo marmar ah si ay ganacsigoodu si habsami leh ugu socdo. Si kastaba ha ahaatee, ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah ayaa la kulma dhibaatooyinka ugu badan ee dhaqaale yari inta badan kuwa dhiggooda ah ee dhisan.
Ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah inta badan waxay ku tiirsan yihiin amaah si ay u bilaabaan hawlgallada bilowga ah una koraan shirkadooda. Isku soo duuduuboo, aad bay u adag tahay in lagu noolaado bilowga bilaa maalgelin ku filan. In kasta oo dariiqyada lagu helo amaahda ganacsiga ay aad u badan yihiin, haddana milkiileyaal ganacsi badan ma yaqaaniin sida loo maro.
In kasta oo amaahiyeyaasha dhaqameedku ay weli yihiin isha ugu weyn ee laga helo amaahda ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah, waxaa sidoo kale jira amaahiyayaal kale oo la heli karo isla ujeeddadaas. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee horyaalla bilowga iyo aasaaska meheradaha yaryar ayaa ah sida loo helo amaah ganacsi si kor loogu qaado ganacsigooda.
Ujeeddada maqaalkan ayaa ah in loo iftiimiyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah sida loo helo amaah ganacsi oo yar. Hoos waxaa ah toban tallaabo oo wax ku ool ah si loo helo amaah ganacsi 2021.
#1. Baro oo aad si cad u fahamto noocyada kala duwan ee amaahda loo heli karo ganacsiyada yaryar
Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo lagu heli karo amaahda ganacsiga oo ikhtiyaarradu way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran baahida ganacsigaaga. Sidaa darteed, fahamka noocyadan amaahda ah iyo sida ay u shaqeeyaan ayaa lama huraan u ah milkiile kasta oo ganacsi.
Waa hal shay in la ogaado sida loo helo amaah ganacsi oo yar iyo mid kale in la fahmo noocyada kala duwan ee amaahda la heli karo iyo isticmaalkooda.
Qaar ka mid ah noocyada la heli karo ee amaahda ganacsi ee yaryar iyo kuwa bilowga ah ayaa ka faa'iidaysan kara waa:
a. Barnaamijka Ilaalinta paycheck (PPP) Amaahda.
Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa ganacsiyada yaryar ee aqoonta leh inay galaan amaahda ganacsiga. Haddii dhaqaalaha loo isticmaalo si sax ah kadib heshiiska amaahda, deynta waa la cafin doonaa. Qaar ka mid ah shuruudaha u -qalmitaanka deymaha PPP waxaa ka mid ah:
Ganacsigu waa inuu keenaa caddayn ugu yaraan 25% hoos u dhac dakhliga guud ee sannadlaha ah rubuc kasta sanadka 2020 marka la barbar dhigo 2019.
Ganacsigu waa inuu ahaadaa ganacsi jira ka hor 15ka Febraayo 2020.
Ganacsigu waa inuu noqdaa mid aan ka badnayn 300 oo shaqaale
Ganacsiyada hore u helay PPP hore, lacagta oo dhan waa in la isticmaalay kahor codsiga mid cusub
Waxaa jira noocyo ganacsiyo gaar ah oo aan u qalmin barnaamijka. Waxaa ka mid ah taangiyada fikirka, lobby -ka iyo xarumaha u doodista siyaasadda, iyo warshadaha si guud looga ganacsado.
Amaahda iskaashiga (PPP) waxay faa'iido u leedahay cusboonaysiinta kirada, dib -u -dhigista kharashaadka mushaharka, dejinta biilasha korontada, iyo kordhinta kharashaadka hawlgalka. Amaahda iskaashi (PPP) ayaa sidoo kale u adeegi karta ujeeddada iibsashada qalabka ilaalinta shaqaalaha sida wejiga iyo nadiifinta.
Waxa kale oo ay kaa caawin kartaa inaad daryeesho qaar ka mid ah kharashyada burburka hantida ee aanay daboolin shirkaddaada caymiska.
b. Amaahda SBA.
Amaahda SBA waa deymo yaryar oo ay dowladdu taageerto oo gacan ka geysta taageeridda ganacsiyada yaryar. Amaahda SBA kuma timaaddo ganaaxyo hore u bixin ah. Hase yeeshee, deymaha lama cafin karo. Bixinta deynta SBA sidoo kale way ka duwan tahay sanadka koowaad. In kastoo, ay soo jiidato xiisaha.
c. Khadka Ganacsiga ee Deynta
Kani waa qaab kale oo amaah ganacsi ah oo ay heli karaan ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah. Caadi ahaan waxaa jira dabool wadarta lacagta maaliyadeed ee shirkaddu ku heli karto habkan.
Khadka ganacsiga ee amaahdu wuxuu faa'iido u leeyahay taageeridda socodka lacagta caddaanka ah ee shirkadda iyo daryeelka kharashyada lama filaanka ah. Khadka ganacsiga ee amaahda ayaa soo jiidata dulsaarka billaha ah waxayna u baahan kartaa cusboonaysiin sanadle ah.
Layn ganacsi oo deyn ah oo aan dib loo cusboonaysiin, lacag -bixin buuxda ayaa loo baahan doonaa.
d. Amaah qalab
Waa nooc kale oo amaah ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah inay sugaan qalabka, baabuurta, iyo software-ka ganacsigooda.
e. Deymaha muddada ganacsiga yaryar
Kuwani waa lacago la heli karo oo loogu talagalay hawlgallada ganacsiga, kobaca ganacsiga, iyo kharashyada raasumaalka.
Amaahda muddada ganacsiga yar -yar waxay soo jiidataa danaha billaha ah iyo sanduuqa aasaasiga ah waa la bixin karaa lix bilood ka dib illaa saddex sano (amaah -bixiyeyaasha qaarkood waxay u oggolaadaan ganacsiyada yaryar sanado badan).
g. Maalgelinta la heli karo ee xisaabta
Tani waxay u oggolaaneysaa shirkaddu inay hesho dhaqaalo degdeg ah iyadoo ku xiran heerka u -qalmitaanka shirkadda. Heerka dulsaarka ee maalgelinta noocan ah waa mid kala duwan.
e. Amaahda raasamaalka shaqada
Amaahda raasamaalka ee shaqada waxaa loo isticmaalaa in lagu maalgeliyo hawl maalmeedka iyo maaraynta degganaanshaha dakhliga ee shirkad.
Amaahda raasamaalka shaqayntu waxay sidoo kale wax ku ool u tahay maaraynta kharashaadka ka dhasha isbeddellada xilliyeedka iyo duruufo kale oo aan la filayn oo laga yaabo inay ka soo baxaan ganacsiga.
f. Kaarka deynta ganacsiga yar
Waxay kaloo u adeegi kartaa ujeeddada maalgelinta muddada-gaaban ee ganacsiyada bilowga ah. Si kastaba ha noqotee, markaad isticmaaleysid kaararka amaahda ee ganacsiga yaryar, hubso inaad sida ugu dhaqsaha badan u bixisid.
Waqti ka dib, deymaha kaararka deynta ganacsiga yaryar waxay noqon karaan kharash aad u weyn waqtiga dhabta ah sababtuna tahay dulsaarka culus.
#2. U fiirso amaahiyeyaasha la heli karo
Waxaa jira dayn -bixiyeyaal dhaqameed iyo deyn -bixiyeyaal kale oo diyaar u ah inay ka caawiyaan ganacsiyada yaryar inay koraan. Waxaad ka heli kartaa iyaga oo ku jira raadinta onlaynka ah ama liisaska deegaanka.
Noocyada amaahiyaha waxaa ka mid ah:
Deyn bixiyeyaasha tooska ah ee internetka
Bangiyada waaweyn ee ganacsiga
Bangiyada bulshada deegaanka
Goobta amaahda ganacsi ee ay isku faca yihiin
Deyn-bixiyeyaasha bangiga ee ay taageerto SBA
#3. Ka fakar fikradda amaahiyaha ee ku saabsan halistaada iyo astaantaada amaahda
Deyn -bixiyeyaashu waxay go'aansadaan inay aqbalaan codsigaaga amaahda ama aysan ku salaysnayn go'aankooda.
Waxyaalaha qaarkood ayaa saameeya go'aankooda waxaana ka mid ah:
Warbixinta amaahda ama dhibcaha dhibcaha ee shirkad
Heerka socodka lacagta iyo taariikhda amaahda ee shirkadda
Qiimaha hantida ku jirta meheradda
Tirada sannadka ee shirkadda dalbatay ay ka shaqaynaysay ganacsiga
Xoogga bayaanka maaliyadeed ee shirkadda
Maalgashadayaasha muhiimka ah ee shirkadda
Waxaa lama huraan ah in la hubiyo in arrimaha kor ku xusan ay waafaqsan yihiin talooyinka amaah -bixiye ka hor intaadan codsan deyn. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah amaahiyeyaasha ayaa laga yaabaa inay kaa rabaan inaad ka badan tahay hal sano ganacsi si aad ugu qalanto inaad dalbato amaah.
#4. Hubi in bayaannada maaliyadeed ay sax yihiin
Deyn -bixiyeyaasha intooda badani waxay maraan bayaannada maaliyadeed iyo diiwaannada xisaabta si adag kahor intaan la ansixin codsiga amaahda.
Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah in la hubiyo in diiwaanadan ay yihiin kuwo sax ah oo la cusbooneysiiyay markii la codsanayo deyn. Haysashada bayaan xisaabtaada oo uu xisaabiyey xisaabiye guud (CPA) ayaa ah faa'iido dheeraad ah.
Si kastaba ha noqotee, deyn -bixiyeyaal badan ayaa iska indha -tira fikradda bayaan xisaabeed la baaray waxayna kaliya codsadaan dukumenti sax ah.
#5. Hubi inaad haysato dhammaan faahfaahinta loo baahan yahay, macluumaadka, iyo dukumiintiyada uu u baahan yahay amaahiyehu ka hor intaadan codsan deyn
Si aad u kordhiso fursadahaaga helitaanka oggolaanshaha dalabka amaahda, hubso inaad haysato dhammaan dukumiintiyada amaah -bixiyuhu u baahan yahay.
Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah inaad akhrido shuruudaha amaahiyaha oo aad hubiso inaad fahamtay dhammaan shuruudaha.
Diyaarso dukumiintiyada ganacsi ee uu deyn -bixiyuhu cayimay oo u rari si waafaqsan tilmaamaha amaah -bixiyaha. Ma aha in qeexitaanku ku kala duwanaan karo mid amaah -bixiye kale.
#6. Hubi inaad sheegto xaddiga amaahda aad u baahan tahay iyo waxa aad damacsan tahay inaad u isticmaasho amaahda marka aad helayso
Mid ka mid ah macluumaadka deyn -bixiyuhu ka codsan doono shirkad dalbanaysa amaah ganacsi oo yar ayaa ah xaddiga iyo ujeeddada sanduuqa. Haddii aad rabto inaad iibsato qalab cusub, ballaariso meheraddaada, ama aad u baahan tahay raasumaal socodsiiya ganacsi, hubi inaad sheegto.
Waxay ka caawin doontaa amaahiyaha inuu ogaado haddii aad si dhab ah u fahamto nooca amaahda aad codsaneyso inaad hesho.
Deyn -bixiyeyaasha qaarkood waxay sidoo kale kuu xilsaaraan khabiir ku xiran codsigaaga si ay kaaga caawiyaan inaad fahanto oo aad doorato nooca amaahda ugu habboon ganacsigaaga.
#7. Ka fikir nooca dammaanadda ama amniga aad ku bixin karto qaddarka deyntaada
Walaaca koowaad ee deyn -bixiyeyaal badan ayaa ah inay hubiyaan in deyn -bixiyuhu dib u bixin karo qaddarka la amaahiyay.
Sidaa darteed, qaar ka mid ah amaahiyeyaasha waxay u baahan doonaan dulsaar amni oo ah qaab hanti, rasiidh xisaabeed, ama qalab. Bixinta amniga ayaa sidoo kale kordhin doonta fursadaha ay shirkaddu ku heli karto amaahda meheradda.
Xaaladaha qaarkood, deyn -bixiyuhu wuxuu codsan karaa in milkiilaha guud ee meheraddu uu bixiyo dammaanad shaqsiyeed.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa lama huraan ah in laga fogaado qabanqaabadan maadaama ay khatar gelinayso hantida gaarka ah ee maamulaha haddii ay dhacdo wax lama filaan ah oo ka dhasha deynta.
#8. Hubi inaad dhex marto oo aad eegto shuruudaha amaahda ka hor intaadan dalban
Waxaa muhiim ah in la hubiyo in amaahda ganacsi ee la soo jeediyay ay si togan ugu biiriso ganacsigaaga kahor intaadan dalban.
Fiiri ereyada muhiimka ah oo isbarbar dhig ereyada kala duwan ee amaahiyeyaasha kala duwan ka hor intaadan go'aankaaga gaarin.
Qaar ka mid ah qodobbada ay tahay in la tixgeliyo waxaa ka mid ah dulsaarka dulsaarka, muddada amaahda, khidmadaha kale (tusaale, khidmadaha wax -ka -qabashada) ee laga yaabo inay khuseeyaan, nooca amniga ama dammaanadda ee ku lifaaqan deynta, duruufaha la xiriira deyn -bixinta, iyo waxa dhacaya haddii deynta waxaa dib loo bixiyaa ka hor wakhtiga loogu talagalay maamulaha.
#9. Qiimee oo hubi astaantaada internetka iyo waxyaabaha aad soo dhejiso
Hadda waxay caado u tahay amaah -bixiyeyaashu inay si taxaddar leh ugu qabtaan ganacsiyada iyo maamulayaashooda ka hor intaan la siinin codsi amaah. Dadaalka habboon waxaa ka mid ah dib -u -eegista meheradda iyo astaanta internetka ee maamulaha.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad marka hore qiimayso astaantaada, ka qaado waxaad u baahan tahay, oo aad ku samayso isbeddellada lagama maarmaanka u ah adiga oo sugaya codsiga amaahdaada.
Hubi inaad ka takhalusto wax kasta ama qoraallo kaa hor istaagi kara fursadahaaga helitaanka deymaha.
#10. Hel macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo helo amaah ganacsi yar
Macluumaad dheeraad ah oo aad ka heshid sida loo helo amaahda ganacsiga yaryar iyo hab -socodkooda, ayay sii fiicnaanaysaa fursadahaaga guusha marka aad codsanayso deyn.
Waxaad ku kalsoonaan kartaa internetka wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan amaahda ganacsiga iyo sida ay u shaqeeyaan.
Waxaa jira qaybo badan oo waxtar leh macluumaad intarneedka kaa caawin kara. Diyaargarow ku filan heliddu waa ka fiican tahay in dhowr jeer la diido sababtoo ah diyaargarowga oo liita.
Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar si ay u qiimeeyaan amaahda ikhtiyaarrada amaahda iyo deyn -bixiyayaal badan. Ikhtiyaarrada amaahdu inta badan way kala duwan yihiin iyadoo loo eegayo baahiyaha ganacsiga iyo deyn -bixiyeyaal badan ayaa u habeeya ikhtiyaarkooda amaahda marka loo eego shuruudaha ganacsiga qaarkood.
Hannaanku wuxuu kaloo noqon karaa mid xoogaa tartan ah, gaar ahaan deymaha ay dowladdu taageerto. Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah inaad si fiican isu diyaariso ka hor intaadan dalban amaahda, si loo yareeyo fursadahaaga in laguu diido. Ogaanshaha sida loo helo amaahda ganacsiga waa lama huraan ka hor codsigaaga.
Miisaaniyaduhu waa shidaalka lagu kaxeeyo meheradaha yaryar dhulka ilaa heerka koritaanka ee xiga.
Sidaa darteed, mar hore oo aad u hesho maaliyad ahaan ganacsi yar, sida ugu dhakhsaha badan meheraddaadu dhulka ayay uga baxdaa waxayna bilaabaysaa inaad gaarto natiijooyinka aad rabto.